Ubonga abalandeli bakhe oweDiepCity
NOMPUMELELO Vilakazi Isithombe: INSTAGRAM
Mbali Khanyile | September 7, 2021
UBONGA uthando lwabalandeli bakhe umlingisi osephenduke intandokazi kubabukeli beDiepCity, oqokwe emkhakheni emithathu kumaRoyalty Soapie Awards.
UNompumelelo Vilakazi ( 23) waseBergville, odlala indawo kaSnenhlanhla kulo mdlalo okhonjiswa kuMzansi Magic, ungomunye wabalingisi abazodlana imilala kulo nyaka emcimbini wezindondo. IRoyalty Soapie Awards iqhakambisa amagalelo abalingisi nabanye abahlanganyelayo uma kukhiqizwa imidlalo ewuchungechunge.
Phakathi kwemikhakha aqokwe kuyo kubalwa owe-Outstanding Newcomer, Outstanding Lead Actress noweViewer’s Choice: Best Actress.
Ubanga isicoco nezinkakha zabalingisi esezimkantshubomvu kule ndima phakathi kwazo kubalwa uKatlego Danke, uNthati Moshesh, Lusanda Mbane nabanye.
Ekhuluma nentatheli yeSolezwe ngeSonto mayelana nokuqokwa kwakhe, uthe uzizwa ebusisekile ngoba usathuka isisinga ezimbalwa kuphela engene emkhakheni wezokulingisa.
“ Lokhu kungikhombisa ukuthi abantu bayakuthakasela ukubuka uSnenhlanhla kwiDiepCity. Ngijabulile kakhulu futhi kuyakhuthaza ukubona abantu bekholelwa kakhulu kumsebenzi engiwenzayo. Kungabe angikho lapha engikhona namhlanje ukube abakhombisanga ukungeseka abalandeli bami abachazwa wumsebenzi abangibona ngiwenza kulo mdlalo. Ngiyalubonga lolu thando oluyisimanga abangikhombisa lona,” kuchaza lentokazi.
Eqhuba uthe kuyisifiso sakhe ukuthola wonke zonke kule minxa aqokwe kuyo. UNompumelo uneziqu zobuthishela azithole eNyuvesi KwaZulu-Natal. Ngenkathi engenela inhlolokhono yeDiepCity ubenguthisha, waqoka ukushiya umsebenzi ukuze afeze iphupho lakhe lokulingisa.
Seziqalile izinhlelo zokuvotelwa kwalabo abaqokiwe. Abanqobile bazomenyezelwa ngoSepthemba 18. Umcimbi uzosakazwa kwiSABC 1 ngo- Okthoba 2 ngo- 8 ebusuku.